जनप्रतिनिधिले ०.५% पनि वाचा पूरा गरेनन् - अध्यक्ष गुरुङ (भिडियो सहित) - Purwanchal Daily
छठका अवसरमा राष्ट्रपति सहभागी नहुने
‘नेकपाभित्र कोरोना जस्तो समस्या छैन’
नेकपा सचिवालय बैठक दश दिनपछि
मन्त्रीमा कोरोना सङ्क्रमण
घरमै बनाएको कुण्डबाट अस्ताउन लागेको सूर्यलाई अघ्र्य
बिर्तामोड उद्योग वाणिज्य संघको साधारणसभा र निर्वाचन स्थगित
बिर्तामोडको पूर्वी सिमानामा सडक सुरक्षा वोर्ड राखियो
छोरीसहित सुस्मिता बेपत्ता
भन्सार छलीको सामानसहित एक जना पक्राउ
‘गोल्ड मेडलको ऋण चुक्ता गर्न नेपालको सेवा गरेरै छोड्छु’
‘सरकारले उद्योगी–व्यवसायीलाई राहत दिनुपर्छ’
‘समृद्ध बाह्रदशी बनाउन स्वार्थरहित भिजनको खाँचो ’
आधिकारिक ट्रेडयूनियनको निर्वाचन बेमौसमी बाजा
संविधान कार्यान्वयन गर्न महिलाले पनि क्षमता बढाउनुपर्छः कानूनमन्त्री तुम्बाहाङ्फे
अब हतारमा फिल्म बनाउँदिनँ : एलिजा गौतम
दिलकुमारले ल्याए ‘छट से रे बेटा’
“आर्या” चलचित्रमा मानुङ डाँडाको प्राकृतिक सौन्दर्य !
उर्मिलाको’जवानी ताजा ताजा छ’मा नाजिर र उषाको जोडी (भिडियो )
क्यानले नेपाल प्रिमियर लिग आयोजना गर्ने
नेपाली टोली एक वर्षपछि फुटबल प्रतियोगिता खेल्दै
झिलझिलेमा साहसिक खेल ‘जिपलाइन’ सुरु
क्रिकेट टोलीको प्रशिक्षण मङ्सिर दोस्रो सातादेखि
के हो चेक (बाउन्स) अनादर ?
वैदेशिक रोजगारी र चुनौतिका पक्ष
कोरोना महामारीमा छठ
कथा भारण्ड पन्छीको : प्रसंग ओली र प्रचण्डको
छठी माताले सबैको कल्याण गरुन्
सजगताले मात्रै परास्त हुन्छ कोभिड–१९
२६ औं वर्ष प्रवेशमा : हाम्रो अपेक्षा र प्रतिबद्धता
आत्मानुशासन कायम गरौं
चीनकाे नियन्त्रणले नेपाली व्यापारीकाे लगानी डुब्दै: कुटनीतिक पहल गर
काँकरभिट्टामा विविध कार्यक्रमसहित देवकोटा जयन्ती मनाईँयो
साहित्य चौतारी झापाले यसरी सम्झियो महाकवि देवकोटालाई
विश्वस्तरका महाकवि देवकोटा जयन्ती मनाइँदै
स्थानीय तह गठनको तीन वर्ष :: जनप्रतिनिधिले ०.५% पनि वाचा पूरा गरेनन् – अध्यक्ष गुरुङ (भिडियो सहित)
२९ असार २०७७, सोमबार ०९:२६ मा प्रकाशित
बिर्तामोड नगरपालिकामा मेयर पदका लागि गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट चुनावी प्रतिष्पर्धामा उत्रिएका जलकुमार गुरुङले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले शून्य दशमलव ५ प्रतिशत पनि आफूले गरेको वाँचा पूरा नगरको आरोप लगाएका छन् । पूर्वाञ्चल दैनिकसंग कुराकानी गर्दै बिर्तामोड साना सहरी खानेपानी उपभोक्ता सस्थाका अध्यक्ष समेत रहेका गुरुङले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि माथि यस्तो गम्भीर आरोप लगाएका हुन् । उनले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले विकासको भेउ नै नपाएको बताएका छन् । निहीत स्वार्थमा रुमलिदा जनप्रतिनिधिले आफ्नो ठाउँको विकास गर्न नसकेको गुरुङको आरोप छ ।
स्थानीय सरकार गठन भएको तीन वर्ष पूरा भएको छ । स्थानीय तह गठनस“गै निर्वाचित जनप्रतिनिधिले गर्दै आएका विकास निर्माणको कामलाई यहाले कुन रुपमा हेर्नु भएको छ ?
– स्थानीय तह गठन भएको पहिलो पटक हो । यो अभ्यासका रुपमा होला । तर, जसरी विकास हुनुपर्ने हो त्यो अनुसारको विकास भने भएको छैन । किन भएको छैन भने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कसरी आफ्नो ठाउँको विकास गर्ने हो त्यसको भेउ नै पाएका छैनन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि अहिले आफैं नै हराइरहेको अवस्था छ । स्थानीय सरकार अहिले पनि आफूहरुलाई बजेट पर्याप्त छैन भन्दै आएका छन् । अहिले मेरो विचारमा आफूलाई चाहिनेभन्दा पनि बढी बजेट स्थानीय तहसँग छ । म घरी–घ भन्छु उनीहरुले आफ्नो गाउँ ठाउँको विकास कसरी गर्ने हो त्यसको भेउ चाहिँ पाएका छैनन् । जनताको काम कसरी गर्ने स्थानीय तहलाई कसरी सबल बनाउने भन्ने सोच चाहिँ छैन एकअर्कामा वादविवाद गर्ने, यो भएन त्यो भएन भन्दै आरोप लगाउने र आफूले आफूलाई नै सबै मै हुँ भन्ने किसिमको अहमता बनाएर हिँड्ने र अरुलाई दोष देखाएर अघि बढिरहेको अवस्था छ । अहिले आफूले आफूलाई सक्षम बनाएर हिँड्ने बेलामा दोषारोपण बढी छ स्थानीय तहमा ।
स्थानीय तहको चुनावताका उम्मेद्वारहरुले लिएर हिडेका एजेण्ड आफू निर्वाचित भएपछि यो अवधिसम्म आइपुग्दासम्ममा जनअपेक्षा अनुसार पूरा गर्न सके या सकेनन् के लाग्छ यहँलाई ?
– त्यो प्रतिबद्धताको त कुरै नगरुँम । २०÷३०औं वर्षदेखि जुन रुपमा विकास भइरहेको थियो अहिले पनि त्यस्तै नै छ । हिजोका दिनमा जसरी काल्पनिक कुराहरु बोले अहिले पनि अवस्था त्यही नै छ । हिजो काल्पनिक कुरा बोल्दै जनतालाई यो गरिदिन्छु त्यो गरिदिन्छु भन्दै आएका छन् अहिले पनि । यो गरिदिन्छु त्यो गरिदिन्छु भन्नेले त भन्छ आफूलाई भोट ल्याउनका लागि, तर जनता कस्ता ? २०औं ३०औं वर्षदेखि यही कुरा भनिरहेका छन् । भाषण त्यस्तै गरिरहेका छन् । काल्पनिक कुरा गरेर हिँड्दा समेत जनता किन चेत्दैनन् लु भन्नुहोस् त । जनताले काल्पनिक कुरामा विश्वास गर्दा पनि हाम्रो गाउँठाउँको विकासमा असर परिरहेको छ । हामी विकास निर्माणमा पछाडि पर्नु पर्ने कारण यो पनि हो कि चुनावको समयमा कुनै नेताले मरभन्दा पनि मर्न पछि पर्दैनन् जनता । तर, नेताले आफ्नो पक्षमा नतिजा ल्याएपछिको अवस्था त उही हुन्छ । जनताले दिएको ‘म्यान्डेट’लाई पूरा गर्न नेताले झन दिन–रात मेहनत गर्नुपर्नेमा आफू ठाउँमा पुगेपछि जनता भुलिहाल्ने परिपार्टी छ । त्यसपछि म आफैं उम्रिएको जस्तो ठान्ने प्रवृत्ति छ । यो बिर्तामोड, झापामा मात्रै होइन, देशभरि नै यही अवस्था छ । सबै स्थानीय तहको अवस्था उस्तै छ । अनि कसरी हुन्छ जनअपेक्षा अनुसारको विकास ।
उसो भए यो तीन वर्षमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेनन् ?
– तपाई हामी सबैले देखिरहेका छौं त कुन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न सके होला त । तपाई आफैं भन्नुहोस् त– धेरै टाढा नजाउन यही बिर्तामोड वरिपरिको मात्रै कुरा गरौं न । चुनावताका गरेका कुराहरु कुन चाहिँ पूरा भएका छन् ? तपाई आफैं पत्रकार । तपाई आफैंले लेख्नुभयो । के भनेका थिए चुनावका बेला जनतालाई उम्मेद्वारले अहिले के चाहिँ पूरा गरे हिजोका दिनमा भनेका कुराहरु । हिजोका दिनमा यो र त्यो गर्छु भनेका कुराहरु मध्ये ०.५ प्रतिशत पनि पूरा भएको मलाई चाहिँ लाग्दैन । बिर्तामोड नगरपालिकाको बजेट हेर्नुहोस् न एक सय १५ करोड रुपैयाँ छ । यो बजेट त सानोतिनो बजेट होइनन् नि । पहिला गाविस हुँदा आठ÷दश लाख धेरै हुँदा २० लाख हुन्थ्यो । त्यसलाई पनि धेरै ठूलो मानिन्थ्यो । अहिले आएर यति ठूलो भोलियममा बजेट आउँदा पनि कोही पनि जनताहरु खुशी भएको म देख्दिनँ । कोही टोलबासी खुशी छैनन् किन छैनन् भने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले काम गर्ने भेउ पाएका छैनन् । गर्न त खोज्छन् तर भेउ पाएनन् । कसो गर्दा जनताको विश्वास जित्न सकिन्छ भन्ने भेउ नपाउनु नै चुनावताका गरेको प्रतिबद्धता पूरा हुन नसकेको हो ।
हिजो स्थानीय तहलाई समृद्ध बनाउने सपना बोकेर चुनावमा पक्ष प्रतिपक्ष भएर होमिएका उम्मेद्वार मध्ये पराजीत उम्मेद्वारस“ग छलफल गरेर बजेट बनाउने विषयमा स्थानीय तहले ध्यान दिएका छन् कि छैनन् । बिर्तामोडकै कुरा गरौं न तपाईस“ग छलफल हुन्छ कि हु“दैन बिर्तामोडको बजेट बनाउने विषयमा । हिजो तपाई पनि समृद्ध बिर्तामोड निर्माणको सुन्दर सपना बोकेर चुनावमा होमिनु भएको थियो नि ।
– मलाई लाग्छ अझैं २०÷३०औं वर्ष यो खाले सोच आउँदैन । यो खाले सोच अहिलेसम्म आएको नै छैन । जसोतसो चुनाव जितेपछि जनताको म्यान्डेट भुल्छन् नेताले । टिमवर्क भएन भने केही गर्न सकिँदैन । एउटा आर्टिसले कुनै चिजको डिजाइन गर्दा झुर पनि देखिन्छ त्यही चिजलाई अर्काे आर्टिसले डिजाइन ग¥यो भने संसारकै सुन्दर पनि देख्ने गरीको बनाउन सक्छ । त्यसकारण हेराई र सोचाइमा फरक पर्छ । नेपालमा विकास निर्माणका लागि भिजन भएर यो गर्छु यसलाई यसरी सुन्दर बनाउँछु भन्ने भिजन नै नभएर लथालिङ्ग अवस्थामा हिजोकै पाराले यहाँको विकास भइरहेको छ । समृद्ध बिर्तामोड निर्माणका लागि के गरिनुपर्छ ।
के गर्दा बिर्तामोड समृद्ध बन्ला । हिजो तपाईले देखेका सपना के थिए बिर्तामोडलाई समृद्ध बनाउन ?
– मलाई लाग्छ यो समृद्धि भन्ने कुरा पनि धेरै सुनिसकियो । समृद्धि भनेको के ? समृद्धि भन्ने शब्दमा मात्रै सिमित छ । समृद्धिको छेउछाउमा कोही पनि पुगेकै छैनन् । समृद्ध बिर्तामोड निर्माणका लागि शब्दले मात्रै पुग्दैन । काम गर्नुपर्छ । नेपालमा हेर्नुहोस्– भाषण गर्ने काम धेरै भइसक्यो । जनतालाई आश्वासन देखाउने काम बढी भयो । कति देखाउनु जनतालाई आश्वासन < कति सुनाउने आधुनिक रंगशाला बनाउने, कति सुनाउने यो बनाउने त्यो बनाउने बाटो बनाउने भनेर जनतालाई अझैं कति र्वाल्ल बनाउने अनि काम चाहिँ नगर्ने । अब जति सकिन्छ त्यति काम गर्ने हो । अब काम गर्ने समय आयो । यो र त्यो गर्छु भन्ने बेला होइन । नभए अब जनताले पत्याउँदैनन् ।
बिर्तामोडको विकासको लागि उसो भए के गरिनुपर्छ अब ?
– हुन त साथीहरुले बिर्तामोडको विकासका लागि सोच्नु भएको होला । तर, मेरो विचारमा यहाँको विकास गर्न अध्ययन गर्नुपर्छ । लामो अध्ययन गर्नुपर्छ । अहिले अध्ययन पटक्कै छैन । अगाडि जे देख्यो त्यही मात्रै छ । विकास गर्नका लागि हजार जना मान्छेले कराएर मात्रै विकास हुँदैन । विकास गर्नका लागि दुई÷चार जना सुरो मान्छेहरु भए भने र यही किसिमले स्थानीय तहमा बजेट आयो भने यहाँको विकास गर्न धेरै समय लाग्दैन । यसलाई नेपालकै सबैभन्दा ‘टप’ बनाउन सकिन्छ । मैले भनिरहेको छु सबै मिलेर काम गरौं । काम गर्ने हो भने कोही बोल्नै पर्दैन । काम देखाएपछि किन बोल्ने < अब बुद्धि किन्ने बेला भयो । मान्छेको भाषण किनेर हुँदैन । भाषण सुनेर हुँदैन । अब खुरापात किनेर हुँदैन । अब त आर्टिस किन्ने समय आयो । अब प्राविधिक किन्नु पर्छ । प्राविधिकको जमाना आइसक्यो । संसारमा ३३÷३४ वर्षको मान्छे वल्र्ड रिर्सज गर्छ । बुद्धि बेचेर । हाम्रोमा त अहिले पनि भाषण बेचेर मान्छे फसाउने काम हुन्छ । यसरी भएन । नेपाल आफैंमा सानो छ । भारतको मात्रै जनसंख्या हेर्ने हो भने त्यत्रो छ । तर, नेपालमा तीन करोड जनसंख्यालाई मिलाएर राख्दै सुन्दर नेपाल बनाउने सपना कोहीसँग छैन । अहिले देखिराख्नुभएको छ राज्यमा यत्रो कोरोनाको महामारीमा यो र त्यो गर्ने भन्दै आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा लागेका छन् दलका नेताहरु । जबसम्म नेपालमा भ्रष्टाचार शून्य हुँदैन तबसम्म नेपालको विकास हुँदैन । स्थानीय तहको त कुरा छाडौं न । विकास निर्माण गर्ने पैसा चार÷पाँच जनाको गोजीमा जान्छ । यसरी सिमित मान्छेको गोजीमा पैसा गएपछि कसरी विकास गर्ने ?
बिर्तामोडको मात्रै होइन समग्र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफ्नो ठाउ“को विकासका लागि के गर्नु पर्छ त ?
– स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले अहिले पनि गरिरहेका छन् आफ्नो ठाउँको विकासका लागि । तर, त्यतिले मात्रै पुग्दैन । अघि मैले भनिहाले धेरै फराकिलो सोच बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । ठूलो छाति गरेर यो बल्लो घर कसको, पल्लो घर कसको भनेर हुँदैन । ठूलो काम विकास गर्न त कहिलेकाँही त्याग पनि गर्नुपर्छ । मैले अहिलेसम्म साथीभाइहरुले कुनै त्याग गरेको देखेकै छैन । कसरी हुन्छ त्यो पल्लो टोलमा मेरो आफ्नो मान्छे बस्छ त्यहाँ बाटो पु¥याउनुपर्छ । बाटो पनि राम्रो होइन जसोतसो बनाउने तीन महिनामा भत्किए पनि भत्कियोस् त्यसरी हुँदैन । जनताले अधिकार दिएका छन् तपाईंहरुलाई आफ्नो ठाउँको विकासका लागि अध्ययन गर्नुहोस्, पढ्नुहोस् कसरी विकास गर्दा आफ्नो ठाउँमा दीर्घकालसम्म राम्रो हुन्छ त्यो बुझ्नुहोस् । अध्ययन नगरिकन केही हुँदैन । स्थानीय तहका कतिपय जनप्रतिनिधिले आफ्नो ठाउँभन्दा बाहिर गएर न त्यहाँको विकास देखेका छन् न देशविदेश गएर त्यहाँको विकास हेरेका छन् कसरी हुन्छ अनि आफ्नो ठाउँको विकास । हेर्नु पर्छ, अध्ययन गर्नुपर्छ, अरुले कसरी विकास गरेका छन् त्यस विषयमा गरिरिएर अध्ययन गर्ने, पढ्ने हो भने मात्रै पनि विकास गर्न गाह्रो छैन ।
अबको दुई वर्षमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले अथवा यही बिर्तामोडका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले आफूले चुनावताका गरेका वाचाहरु पूरा गर्लान् त ?
– अबको के को दुई वर्षमा २५ वर्षमा पनि पूरा गर्न सक्दैनन् । कतिपय मन्त्रीहरुले ५० वर्षसम्ममा पनि मन्त्री भइरहँदा पनि पूरा गर्न नसक्ने सपनाहरु बाँडेका छन् । तर, त्यो पनि जनताले पत्याएका छन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले चुनावका बेला भनेका कुराहरु आफैं बुझ्नुपर्ने हो नि तर बुझ्दैनन् । बहुदलीय व्यवस्था आएको पनि धेरै समय भइसक्यो जनतालाई झुक्याएर मात्रै हुँदैन । जनताले पनि अब बिस्तारै बुझ्नुपर्छ । अब नेताले जता–जता फकाउँछ उतै–उतै होइन को काम गर्न सक्षम छन् त्यो चाहिँ जनताले विचार गर्नुपर्छ । नत्र अबको दुई वर्षमा होइन २०÷२५औं वर्षमा पनि हिजो देखाएका सपना जनता समक्ष गरेका बाचाहरु पूरा गर्न सकिँदैन ।
भिडियो अन्तरवार्ता हेर्न र सुन्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।
प्रस्तुति सुरेन्द्र भण्डारी
Previous articleपीसीआर प्रयोगशालाका लागि दमकका सहकारीले दिए रकम
Next articleपाँचथरको पहिलो लघुजलविधुत जिर्ण अवस्थामा, एक सय ५० घर सेवाबाट प्रभावित
झापामा आज सङ्क्रमित दुईको मृत्यु
घर–आँगनमै छठ पर्व : अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिइँदै
नगरप्रमुख छाडेर सङ्क्रमित बोक्दै चालक
छठ पर्वअन्तर्गत आज सन्ध्याकालीन अर्घ दिई पूजापाठ गरिने
51 वर्ष अगाडि